Maareeyaha Furaha Kaspersky wuxuu abuurayay fure sir ah | Waxaan ka socdaa mac
Dabcan waa inaad dareento been abuur. Waxaa kuu soo baxday inaad iibsaneyso softiweer si faylashaada loo xafido oo loo badbaadiyo, waxaana soo baxday in muddo ah, furaha sirta ah ee lagu sameeyay arjiga la sheegay inay ahaayeen kuwo aad u sahal male.
Hadaad isticmaaleyso Maareeyaha Furaha Kaspersky Si aad uqariso feylashaada, hubi furaha sirta ah ee la sameeyay oo aad bedesho, maxaa yeelay waxay u sahlanaan karaan hacker yar oo xariif ah inuu qiyaaso. Waxaan idhi, inaan dareemo khiyaano, shaki la'aan.
Haddii aad in muddo ah ka isticmaaleysay barnaamijka 'Kaspersky Password Manager' (KPM) Mac-gaaga, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad soo saarto ereyo sir ah oo cusub. Cilmi-baare xagga amniga ah ayaa daah-furay laba cilladood oo u rogi kara haakarisku inuu kaliya tijaabiyo 100 oo sirta ah si aad u hesho taada oo laga sameeyay KPM. Maxaa dhar ah, Mr. Kaspersky.
ZDNet ayaa daabacday a warbixinta halkaas oo uu ku sharaxayo in furahan sirta ah ee khaldan ay yihiin kuwa ay soo saareen KPM ilaa Oktoobar 2019. Khaladka weyn ee ay gashay KPM wuxuu ahaa inuu isticmaalo nidaamka hada jira ilbiriqsiyo ahaan isagoo ah matoor nambarka khiyaanada.
Taas macnaheedu waxa weeye in kombiyuutar kasta oo leh Kaspersky Password Manager oo adduunka lagu rakibay uu soo saari doono isla erey isku mid ah ilbiriqsikiiba. Tusaale ahaan, waxaa jira 315619200 ilbiriqsi inta udhaxeysa 2010 iyo 2021, sidaa darteed KPM waxay abuuri kartaa ugu badnaan 315619200 eray sir ah oo loogu talagalay dabeecad la siiyay. Weerar lagu qaaday qaab guud waxay qaadaneysaa daqiiqado kooban in furaha furihiisa.
Warbixinta ayaa xustay in sababta oo ah degellada internetku ay inta badan muujiyaan waqtiga xisaab abuurka, taasi waxay ka tagi doontaa dadka isticmaala KPM u nugul weerarka xoog caayaan ilaa 100 erey oo sir ah.
Kaspersky ayaa aqoonsaday dhibaatooyinka, oo si cad u xaqiijiyey in nidaam cusub oo soo saarista ereyga sirta ah uu hadda shaqeynayo. Waxay sidoo kale tilmaamtay in amniga, haddii aad isticmaaleysay KPM kahor Oktoobar 2019, waxay kugula talineysaa in dhammaan ereyada sirta ah ee ay soo saarto arjiga la beddelo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Maareeyaha Furaha Kaspersky wuxuu abuurayay furayaal si fudud loo qiyaaso
Qaar ka mid ah dadka isticmaala HomePod waxay ku andacoodaan in nooca 14.6 ay joojiyeen shaqada
Touch Bar ayaa laga yaabaa inuu baaba'o 14 iyo 16 "MacBook Pros